कित्ता माहात्म्य « Clickmandu
किता अर्थात् कुनै कम्पनीको शेयर पुँजीको सानो इकाई । लगानी वा कारोवार दुवैको लागि अपरिहार्य । जसरी राज्य सत्तामा कब्जा जमाउन भोटको आवश्यक पर्छ, कम्पनीको सत्तामा कब्जा जमाउन वा सत्तामा पुर्याउन पनि कित्ताको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले कित्ता नै कम्पनीको सत्ता र बजारमा नेतृत्वको आधार हो । बजारमा कित्ता हुने र नहुनेको घम्साघम्सी हुन्छ भने कम्पनीमा कसको बढी कित्ता भन्ने । कित्ता धारकलाई शेयरधनी वा हिस्सेदार भन्छन् ।
कित्ता कसरी प्राप्त गर्ने ?
कित्ता प्राप्त गर्ने तरिका भनेको (१) कम्पनीको तर्फबाट सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) हुँदा अंकित मूल्यमा किन्ने,(२) शेयरबजारबाट किन्ने, (३) कम्पनीको तर्फबाट हकप्रद, थप निष्कासनको समयमा किन्ने, (४) कसैले आफ्नो हक दावी नगरेको शेयर लिलामी हुँदा किन्ने । जुन तरिका अपनाए पनि मुख्य उद्देश्य कित्ता प्राप्त गर्नु नै हो ।
कम्पनीको लागि प्रत्येक कित्ताको अंकित मूल्य रु. १०० हो र कम्पनीले पुँजी संकलन गर्न सोही अंकित मूल्यमा बेच्छ । थप निष्कासन कम्पनी मार्फत नै हुने भए तापनि निर्धारित सूत्र वा नियामकबाट स्वीकृत दरमा कित्ताको विक्री हुनेहुँदा तोकिएको मूल्यमा किन्नु पर्ने हुन्छ । तर लिलामीमा भने बोलकवोल दरमा बढी मूल्य कबुल्नेले पाउने हुँदा मूल्य आफूले नै तय गर्ने हो । उल्लेखित तरिकाले कित्ता तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा पाइन्छ । यी विधीहरुबाट भने चाहे जति वा लिन खोजे जति कित्ता पाइदैन ।
कित्तामा अधिकार जमाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको शेयर बजारबाट किन्ने हो । त्यहाँ आफूसँग भएको कित्ता विभिन्न कारणले बेच्न बसेका हुन्छन्, त्यसमध्ये आफूलाई ठिक लागेको वा तिर्न चाहेको मूल्यको कित्ताहरु किन्न पाइन्छ । यसको लागि (१) शेयर अभौतिक रुपमा जम्मा गर्ने खाता (डिम्याट खाता), (२) बैंक खाता खोल्नुपर्छ । यति भएपछि नागरिकताको फोटोकपि र फोटो लिएर शेयर दलालको अफिसमा जाने । त्यहाँ ग्राहक पहिचान फारम भर्नुपर्छ । अब तपाइँ शेयरबजारबाट कित्ता किन्न योग्यता पुग्छ । कित्ता किन्न अब आवश्यक पैसाको जोहो गरी दलाललाई कुन कम्पनीको कति कित्ता कति दरसम्ममा वा बजार मूल्य अनुसार किनीदिन खरिद आदेश दिनुपर्छ । दलालले तपाइँको आदेश अनुसार कित्ता किनेर फोन वा मेसेजबाट किनिएको कित्ता र कुल लागतको जानकारी दिन्छ । तपाइँले तोकिए अनुसार उक्त रकम दलालको बैंक वा अफिसमा जम्मा गरिदिनुपर्छ ।
कित्ताले सत्तामा पुर्याउने मात्र होइन, यसले आर्थिक मत्ता र यता न उताको पनि बनाउन सक्छ । त्यसैले त भन्छन्, सिंहको सवार सजिलो तर ओर्लन गाह्रो । एक त कित्ता पाउनै मुस्किल, पाएको कित्ता जोगाउन मुस्किल हुन्छ । कित्ता कुन पैसाले किनेको, कस्तो कम्पनीको त्यस आधारमा पाल्दा लाग्ने खर्च पनि फरक हुन्छ । अनि शेयरबजारबाट भित्र्याउने कित्ताको त झन् मूल्य फरकफरक हुन्छ ।
आफैले भर्खर ६५० मा किनेको कित्ता एकैछिनमा ६५१ वा ६४९ वा ६०० नै पनि हुनसक्छ । त्यो भनेको उक्त कम्पनीको कित्ता किन्ने र बेच्ने कति छन् र उनीहरुको कित्ता लेनदेनको लागि भईरहेको मोलमोलाइ हो । यसले तपाइको कित्ताको रुपमा रहेको सम्पत्तिको बजारमूल्य पनि तलमाथि हुन्छ । हो, कम्पनी मार्फत बेचेको कित्ताको मूल्य भने निश्चित हुन्छ । त्यसैले कित्ताको पहिलो जोखिम भनेको बजार मूल्यमा हुने घटबढ हो है ।
हुनतः कित्ता किन्ने कम्पनीको सत्तामा जान वा सत्तामा पुर्याउन हो । तर सबैजना सत्तामा पुग्दैनन र सत्तामा पुर्याइएकाहरुबाट पनि राम्रो काम हुन्छ भन्ने हुन्न । त्यसले कित्तासँगै कम्पनीको व्यवसायको आधारमा सिर्जना हुने जोखिमको पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कम्पनीको व्यवसाय राम्राे हुँदा मुनाफा बढ्छ र कित्ताधारी हामीले धारण गरेको कित्ताको अनुपातमा कम्पनीले बाँडे अनुसार नाफा पाउँछौं । तर कहिलेकाही राष्ट्रिय– अन्तराष्ट्रिय आर्थिक–सामाजिक अवस्था, सरकारको आर्थिक नीति, नियामकहरुको कानुनी व्यवस्था आदिले गर्दा कम्पनीले राम्रो मुनाफा गर्न सक्दैनन् । हो, कित्ता धारण गरेपछि कम्पनीको घाटाको प्रत्यक्ष जोखिम पनि लिनुपर्ने हुन्छ । तर कम्पनी जति नै घाटामा गएपनि घरखेतबाट तिर्नुपर्दैन । कम्पनीको नाफाघाटा, कित्ताको दोस्रो जोखिम हो ।
कित्ता किन लिने र केकेमा ध्यान दिने ?
कित्ता किन्ने मानिस अनुसार कम्पनीको सत्तामा कब्जा जमाउन र कम्पनीको नाफामा हिस्सेदारी कायम गर्न वा सस्तोमा किनेर नाफा सहित बेच्न किनिन्छ । दुवै अवस्थामा,
१. किन्दा सकेसम्म सस्तो र बेच्दा महंगो हुनुपर्छ । त्यसैले किन्न खोज्नेले तर्साएर, अनर्गल कुरा गरेर बजारमा कित्ताको मूल्य घटाउन खोज्छ भने बेच्नेले पनि लोभलालच देखाएर कित्ता भिडाउन खोज्छ । अझ बजारमा कित्ताको मूल्य निकै बढेको वा घटेको अवस्थामा यस्तो चलखेल बढी नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कित्ता किन्न र बेच्न निकै सचेत हुनुपर्छ ।
२. कम्पनीको सत्ता कब्जा गर्ने अवस्थामा बाहेक कित्ता किन्दा बजारमा पाइने एउटै समूह, उतिकै मूल्य र एउटै कम्पनीको किन्नु हुन्न । भनेको सबै पैसा एकै ठाउँमा खन्याउनु हुन्न ।
३. सम्पत्तिको रुपमा जोडेको कित्ताको बजारमूल्यभन्दा आफूसँग भएको कित्ताको औसत लागत बढी भए बजारबाट सस्तोमा किनेर लागत कम गर्ने र लागत भन्दा बढी भएको अवस्थामा बेच्न पनि सकिन्छ ।
४. कित्ता लिएको कम्पनी तुलनात्मक रुपमा कसरी काम गरिरहेको छ, मुनाफाको अवस्था, व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरुमा जानकारी लिईराख्नुपर्छ । यसको लागि पत्रपत्रिकामा निस्कने त्रैमासिक रिपोर्ट, साधारणसभामा पाइने वार्षिक प्रतिवेदन र आवश्यकता अनुसार कम्पनीमा गएर अवस्था बुझ्नु पर्छ ।
५. कहिले पनि आफ्नो आर्थिक र जोखिम लिने क्षमताभन्दा बढी कित्ता किन्नु हुन्न । यसले आर्थिक सामाजिक रुपमा अप्ठेरो अवस्थामा पुर्याउँछ ।
कित्ताधारीहरुको आ–आफ्नै उद्देश्य हुन सक्छन् । तर सबैले कित्ता प्राप्त गर्ने, जोगाउने र बढाउने हुनुपर्छ । किनभने कित्ताको खेलमा जहिलेपनि अरुसँगभन्दा आफूसँग धेरै र बढी कित्ता राख्ने प्रयास भइरहन्छ । जति बढी कित्ता कम्पनीको मुनाफामा त्यति नै बढी हिस्सा । आफूसँग धेरै कित्ता भएपछि त्यसको बजारमूल्य निर्धारणमा पनि अहम भूमिका खेल्न सकिन्छ ।
तर कित्ता पाल्न त्यति सहज छैन् । किन्दाको लागत मात्र होइन, त्यो पैसा अन्त लगाउँदा आउने नाफा गुमाउनु पर्ने एकातिर हुन्छ भने ऋणमा पैसा लिएर कित्ता किनेको अवस्थामा सम्झौता अनुसारको व्याज र सावाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए कबुल अनुसार ऋणदिनेले धितोमा राखेको कित्ता नै बेचिदिने जोखिम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुन र कति कित्ता जोगाउने विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
विशेषगरी, बजारमा कित्ताको मूल्य घटेको अवस्था, जस्लाई बियरिस पनि भन्छन्, कित्ता जोगाउन धौधौ हुन्छ । एकातिर, कित्ताको मूल्य घटेसँगै सम्पत्ति घटिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर ऋण दिनले थप धितो वा पैसा जम्मा गर्न ताकेता गर्छ । बेचेर तिरौं घाटा लाग्छ । हो, त्यसैले कम्पनीको सत्ता वा मुनाफाको लोभमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कित्ता पाल्नु हुन्न । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले आफूसँग भएका राम्रा कम्पनीका कित्ताहरु जसको पछि भाउ बढ्ने र मुनाफा दिने सम्भावना छ, तिनलाई जोगाउने । यसरी जोगाउन त्यस्तै परे केही नराम्रा कित्ता बेच्ने वा कम घाटा भएका कित्ता बेच्ने ।
कित्ता किन्दा जति सोच्नुपर्छ, बेच्दा त्यो भन्दा बढी सोच्नुपर्छ । किन्दा जसरी दुःखको पैसा परेको हुन्छ, बेच्दा घाटा पनि हुन सक्छ । कहिलेकाही महंगोमा बेचेर सस्तोमा उही कम्पनीको कित्ता किन्ने पनि गरिन्छ । तर यसो गर्दा पनि कति कित्ता बेचेर कति कित्ता किन्न सकिन्छ हिसाव गर्नुपर्छ । नभए हामीसँग भएको कित्ता त लिन्छन् नै हामीले सस्तोमा खोज्दा भुइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत पोखिन सक्छ ।
कित्ता माहात्म्य आजलाई इति । कित्ताधारकाय नमो नम ।
सहरको सेयर बजार यसरी पुग्यो गाउँसम्मः रामेश्वर खनाल
नेपालमा अहिले सेयर किन्नका लागि सहजै पहुँच भयो । बैंकमा आश्वा लागू भयो । आश्वाले
सुन काण्डपछि विमानस्थलको सुरक्षा जाँचमा कडाइ, जुत्ता, घडी, पर्स र पेटी समेत खोल्नुपर्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक उडानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । केही दिनअघि विमानस्थलबाट